Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / SIDEE LOOGU DOORAN KARAA QAADKA BATHROOM-KA
2020 / 11 / 18 QoondayntaTilmaamaha qasabada 10411 0
Mar kasta oo aad dooratid inaad dib u habayn ku sameysid musqulahaaga, waxaa ku soo food leh go'aanno aan tiro lahayn. Miyaad ku dhejin doontaa naqshadda hadda jirta ama dib u qaabeyn doontaa? Barnaamij noocee ah ayaad jeclaan laheyd inaad isticmaasho? Maxay yihiin waxyaabaha aad jeceshahay inaad ku darto? Isla wax aan waxba tarayn, sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad ka go'aan ka gaarto nooca saxanka jikada ee ugu fiican nooca unugyada aad u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato qasabadaha musqusha.
Si looga caawiyo dadaalkaaga inaad ka caawiso sameynta doorashada ugu fiican, halkan waxaa ku yaal jaleec waxa aad u baahan tahay inaad ogaato markaad dooranayso musqusha qiimo dhimista qasabadaha internetka.
HAWLGALKA Xulashada Qasnadaha Musqusha
Musqusha musqusha waa nooc ka mid ah astaamaha aad si dhib yar weligaa u dareentid ilaa aad dib u habayn ku samaynayso aagga. Loogu talagalay in lagu xakameeyo sida iyo meesha biyaha caadiga ah ugu dhaqaaqaan saxanka, qasabadaha waa lama huraan musqusha, laakiin waxaa lagu heli karaa waxyaabo iyo naqshado badan. Shakhsiyaad badan, qasabadaha ayaa ah waxyaabaha ugu dambeeya ee naqshadaynta musqusha. Sideed uga go'aan qaadan doontaa wax u eg dareen dheeri ah laakiin ah muuqaal loo baahan yahay? Ka waran dhacdada aad tixgelinayso markasta oo aad dooranaysid qasabadaha musqusha ee ugufiican booskaaga?
Noocyada qasabadaha la heli karo
Gudaha suuqa musqusha ee lagu rakibo fursadaha, waxaa jira noocyo badan oo aasaasi ah oo qasabado ah oo inta badan ku habboon. In kasta oo ay weli jiraan moodooyin kale oo aan ka ahayn aasaasiyadan, halkan waxaa ku yaal noocyada qasabadaha ugu badan:
Noocan qasabaddu wuxuu leeyahay tolmo iyo laba gacmood oo lagu dhejiyay saxan, iyadoo la abuurayo hal qasabad oo loogu talagalay saxanka oo leh saddex god oo qasab ah oo u kala jira 4 inji.
Tuubbada baahsan waxay leedahay qulqulo kale iyo gacan qabsiyo kala jaban, mid walbana si madax-bannaan ayaa loogu rakibay saddex god oo saxanka weelka ku yaal.
Saxanka kaliya ee godku wuxuu leeyahay sida saxda ah - dalool shaqsi ah oo runtii saxanka lagu rakibo. Caadi ahaan abuurista muuqaalka maanta, qasabadahaani sidoo kale waxay keydiyaan booska iyagoo si adag uga qaadanaya wax-ka-soo-horjeedka.
Saxanka darbiga ku rakiban ayaa ka qaada saxanka saxanka jikada gebi ahaanba adoo ku dhejinaya qaab dhismeedka derbiga ee ka sarreeya saxanka jikada, halkii. Wanaagsan ee saxanka weelka ama nashqadaha kale ee aan lahayn godadka qasabadda, saxanka noocan ah wuxuu u baahan yahay marin u helidda ilaha biyaha ee xuubka gidaarka, kaas oo u baahan kara xoogaa dib u habeyn Haddii aad horey u haysatid qasabad gaar ah maskaxda, way fududahay inaad dukaanka xulato qaababka sababta noocaas oo aad u doorato midka ugu muhiimsan ee aad jeceshahay. Haddii aadan weli hubin qasabadda la dooranayo, hase yeeshe, waxaad u baahan doontaa inaad sii xukuntid.
Su'aalaha la tixgelinayo
Si loo go'aamiyo qasabadaha ku habboon musqulahaaga ugu fiican, tani waa su'aalo dhowr ah oo si fiican dib ugu eegi kara shaqadaada qaabeynta:
Maxaa ku habboon saxanka jikadaada?
Saxanka aad isticmaaleysid wuxuu si toos ah saameyn ugu yeelanayaa qasabada aad dooratid maxaa yeelay waxaad dooneysaa qasabad ku habboon godka aad ka furantahay. Haddii aad dib ugu hagaajinaysid qasabadaada saxanka jikada ee aad in mudo ah haysatay ama aad iibsaneysid saxan cusub oo aad ku raaceysid iibsashada jikada cusub, si sax ah u ogaw nooca farqiga aad u baahan tahay inaad dejiso - hal-god , centre, wax caadi ah ama dhajinta gidaarka?
Waa maxay astaamaha aad rabto?
Mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan suuqa tubbada maanta ayaa ah dhammaan xulashooyinkaaga aad heli karto. Ma rabtaa qasabad socodka-hooseysa ah, tusaale ahaan, si ay kaaga caawiso keydinta biyaha? Miyaad ka fiirsanaysay aerator-yare yareyn kara isticmaalka biyaha caadiga ah isla markaana wax ka yar ku bixin kara? Waxaa laga yaabaa inaad ka fikireyso qasabad gacmo-la’aan ah oo dhaqdhaqaaq dhaqaajisa si aad u bilawdo marka aad gacmaha hoos dhigto oo aad joojiso marka aad ka fogayso. Waxa kale oo jira qasabado lidka bakteeriyada ku shaqeeya ee ozone-ku-shaqeeya oo loo sameeyay si looga takhaluso bakteeriyada ku jirta biyahaaga caadiga ah ee guriga. Baadh xulashooyinka si aad u aragto waxa adiga kuugu muuqda adiga.
Maxaa dusha sare ku dhammeeyaa aad doorbideysaa?
Suuqa qasabadda maanta waxaa ku jira noocyo kala duwan oo dhammeystiran: ahamaal la safeeyey, bir bir ah, nikkel nibiraysan, nikkel nijaasaysan, nikil la dubay, ahama, naxaas, naxaas la caddeeyey, naxaas saliid lagu duubay, dhoobada lagu daray iyo in ka badan. Madaxa u aad qolka madbakha ama ka raadi dukaan aad adigu iskaa u sameysato si aad u sahamiso xulashooyinka oo aad u ogaatid nooca aad u jeceshahay.
Waa maxay miisaaniyaddaada maaliyadeed?
Adoo diirada saaraya inta aad awoodo waxay xudduud muhiim ah u noqon kartaa dukaamaysiga qasabada, kaa caawinaya inaad iska ilaaliso qarash gareynta iyo qoomamaynta naqshadaada. Intaad isticmaaleyso miisaaniyada aad u dejisay musqushaada, eeg waxa qasabadaha iyo astaamaha ku habboon qorshahaas.
Waa maxay noocyada qasabadaha laga isticmaalo guryaha la midka ah?
Hab kale oo la isku dayay-oo-run ah oo lagu helo dhiirrigelin dib-u-habeyn ah ayaa ku daalacanaya fikradaha guryaha la midka ah. Dhex mara guryaha maxalliga ah iyo waxa ay bixiyaan - ma waxay u janjeeraan qaab gaar ah ama aalad muuqaal ah? Taasi waxay kuu tilmaami kartaa hab aad rabto inaad ku socoto, sidoo kale.
Markaad diyaar u tahay inaad sameyso qasabad aad ku iibsato musqushaada dib u hagaajinta, u imow Musqusha Casriga ah. Maaddaama aan nahay shirkadda bixisa adeegga tooska ah ee tooska ah ee warshadaha alaabada musqusha, waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno qiimayaal boqolkiiba 70 ka hooseeya dhammaan noocyada musqusha. Kaga dukaamee qashinkeena qasabadaha khadka tooska ah si aad u hesho xulashada kuugu habboon.
Hore:: Sida Loogu Xulo Qasabadaha Saxda ah ee Basaskaaga Next: Talaabo Talaabo Talaabo ah oo ku saabsan Dayactirka iyo Sida Loogu Iibsado Qasabadaha qasabadaha khadka tooska ah